Ethiopia | OROMIASAMSUNG
abdulwasi	 Oct 10, 2020 25
abdulwasi	 Sep 9, 2020 0
Bilbilli biyya alaa irraa bilbilamu akkamiin lakkoofsa biyya keessaa ta'ee dhufa? Maaliif akkas gochuun barbaachise? Eenyutu irraa faayyadama? Biyyoota garaa garaa irraa gara biyya keessaatti namoonni bilbilan tokko tokko lakkoofsa…
Ethio Telecom akkam godhee ummata saamaa jira? 1. osoo isin hin beekin guyya guyyaan kaardiin bilbila keessanii irra hatamaa deema. Kana booda Ethio Telecomitti bilbiltanii yammuu gaafattan "lakkoofsa dijiitii sadii ykn afur qabu tokko…
abdulwasi	 Aug 17, 2020 0
Ethiopia keessatti Qunnamtiin interneetaa irra deddeebin ugguramuu ni danda'a. Haa ta'uu malee maloota interneeta uggurame ittiin hojjachiisan faayyadamuun tajaajila nurraa kutame argachuu ni dandeenya. Garuu dursa irratti, osoo…